Ntuziaka kachasị mma banyere otu esi azụta ndị na-eso ụzọ na Twitch | AudienceGain Ltd
Chọrọ ịma ka esi eme zụta ụmụazụ Twitch nri?
Maka ozi gị, Twitch nwere ike ịbụ otu n'ime usoro ntanetị mgbasa ozi kachasị ewu ewu maka ndị na-egwu egwuregwu n'ebe ahụ.
Twitch bụ ụlọ ọrụ Amazon nke malitere ịnweta steam na 2014, imirikiti ọdịnaya ị ga-ahụ na saịtị a bụ iyi nke ndị ọrụ na-enye ntụrụndụ na nka ha na egwuregwu vidio.
Laa azụ n'ụbọchị ahụ, ịnweghị ohere ịtụgharị ihe omume egwuregwu gị ka ọ bụrụ igwe na-akpata ego zuru oke, mana Twitch na-enyere ndị ọrụ ya aka itinye ego na nyiwe ha ma mee ka agụụ ha bụrụ ọrụ oge niile.
Nke a pụtara na ị nwere ike n'ụzọ nkịtị enweta ego site n'ịgba egwu n'ịntanetị, nke ọ bụrụ na nke a bụ agụụ gị, ọ ga-abụ nrọ na-emezu. Agbanyeghị, na nhọrọ a dị apụtaghị na ọ dị mfe.
Enwere ọtụtụ mmadụ n'elu ikpo okwu nwere otu ebumnuche nke inweta ọtụtụ ndị na-ekiri, ndị na-eso ụzọ, na ndị na-akwụ ụgwọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-agbasi mbọ ike ka a hụ ha n'etiti ndị ọzọ na otu ha.
Ya mere, ịzụrụ onye na-eso ụzọ Twitchs abụrụla ụzọ isi mee ka ọnụ ọgụgụ ndị na - eso ụzọ ya mụbaa na asọmpi n'etiti ndị iyi Twitch.
Mana eziokwu bụ, ọ bụghị mmadụ niile maara etu esi eme ya ọfụma.
Kechioma n'ihi na ị, anyị bụ ndị a na-agwa gị niile banyere ya. Ka anyị banye n'ime ya!
Gini mere ndi mmadu ji azuta ndi na-eso uzo?
Gịnị kpatara ndị mmadụ ji azụrụ ndị na-eso ụzọ Twitch?
Mgbe ị nwere nnukwu ihe na Twitch, ọ dị mfe ịnweta ego site na mbọ gị.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmasị ndị na-eso gị ugbu a na Twitch, ma ịchọrọ ịchọta ndị ọzọ ga-amasị gị dịka obodo anyị dị, ịkwesịrị ịzụta ndị na-eso ụzọ Twitch.
Mgbe inwetara otuto sitere n’aka ndị na - eso ụzọ dị elu na - enyocha ọwa gị yana ọdịnaya ya, mgbe ahụ ndị mmadụ na - eleta ya na nke mbụ ga - enwe mmasị na ha ga - achọ ịnọ ma chọpụta ihe ndị ọzọ.
Ọ bụ eziokwu na usoro dị mfe nke ụlọ ọrụ Twitch - ọ bụ karịa ndị na - eso ụzọ gị ka ị nwere, ọ ga - adị mfe ịnweta ndị na - eso ụzọ ọhụrụ.
Ọ ga - eme ka ohere ị nwere ịbanye na ndepụta ndepụta Twitch a na - achọsi ike wee bụrụ nke ndị na - ege ntị sara mbara karị hụrụ.
Ndị na - eso ụzọ dị elu ị nwetara ịzụ ndị na-eso ụzọ Twitch ga-akpaghị aka ịbawanye iru gị, na-enweghị ime ihe ọ bụla ọzọ na njedebe gị belụsọ mepụta ọdịnaya dị egwu nke ndị mmadụ ga-ahụ n'anya.
Chee echiche banyere ọdọ mmiri Twitch ndị ọzọ ị na-ele anya n'okpukpe. Ole ụmụazụ ole ka ha nwere? Ọ bụrụ na ọ dị ọtụtụ, mgbe ahụ ọ nwere ike ịbawanye ụba na ebe ahụ
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ndị mmadụ na-echekarị na inwe ọtụtụ ndị na-eso ụzọ bụ akara nke nnabata maka ọdịnaya dị mma na nka nnabata.
N'ezie, ndị kacha nweta ego na Twitch na-eme ihe karịrị $ 300ka ọnwa site na mbọ ha na-agba. All na-ekele nnukwu ụlọ ọrụ ha.
Agbanyeghị, maka ọtụtụ obere oge, ọ nwere ike isiri gị ike ịme aha gị n'onwe gị.
Ya mere, iji nweta ihe na-agagharị n'ụzọ kachasị mma iji bulie arụmọrụ nke Twitch gị, ịzụta ndị na-eso ụzọ Twitch bụ n'ezie ihe a ga-atụle nke ọma.
Esi zụta ezigbo ndị na-eso ụzọ Twitch
Ihe banyere ịzụta ndị na-eso ụzọ Twitch gị, n'agbanyeghị, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọrụ Twitch nọ ebe ahụ na-eme ya, ha na-ewere ụzọ aghụghọ iji mee ya.
Ha debanyere aha na ụlọ ọrụ nwere ọnụahịa dị ọnụ ala na atụmatụ mara mma - mana ihe ha nwetara bụ ndị na-eso ụzọ adịgboroja dị ala.
Ndị na-eso ụzọ Twitch ahụ nwere ike ime ka akaụntụ gị dị mma maka ntakịrị, mana n'ikpeazụ, ha ga-egosipụta ezi agba ha ma mee ka ọwa gị dị ka ihe adịgboroja.
Ha ga-enwe ọnụ ọgụgụ njigide na-adịghị mma, nke pụtara na ha ga-adaba ọzọ naanị ụbọchị ole na ole.
Na nkenke, ndị na-eso ụzọ Twitch ndị na-eso ụzọ ga-eme ka akaụntụ gị dị njọ.
Maka nke a, mgbe ị na-achọ ịchọta ebe kacha mma ịzụta ndị na-eso ụzọ Twitch, ịkwesịrị ịnọ na nche mgbe niile maka ụlọ ọrụ maka ins na outs nke ụlọ ọrụ ndị ahụ.
Nke a bụ iji jide n'aka na ị gaghị enweta uru nke ma ọ bụ debanye aha na ụlọ ọrụ ga-ada ada ma daa gị. Yabụ ebe a bụ ihe ịkwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-achọta ebe ịzụta ndị na-eso ụzọ Twitch.
Enwere ezigbo akara n'etiti ụlọ ọrụ na-ekwe nkwa nnyefe ọsịsọ na nke nwere ike ịbịara gị n'oge kwesịrị ekwesị, na-enweghị ịchọ spammy ma ọ bụ enyo.
Ọ bụ ezie na a ka na-ebute nnyefe ọsọ ọsọ, ụlọ ọrụ ndị na-ere nkwekọrịta adịgboroja na nke dị ala agaghị enwe ike inyere gị aka na ezigbo ndị na-eso ụzọ. Yabụ na ọ dịịrị ha mfe izipu ndị na-eso ụzọ adịgboroja ahụ ozugbo ebe ọ bụ na ha ekwesịghị ịchọta ha.
Yabụ, ọ bụ maka ọdịmma gị ka ijide n'aka na ị nwere ike ịchọta ụlọ ọrụ nwere ezigbo nnyefe oge, mana ọ gaghị eziga ha naanị obere awa mgbe ị nyere iwu.
Otu n'ime ihe kachasị mkpa ị ga-eche banyere ịchọta ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike ịzụta ndị na-eso ụzọ Twitch bụ ọnụego njide ha.
Maka nke a, ị nwere ike ịlele nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa ndị ọzọ. Ndi mmiri iyi ahụ hụrụ ndị na-eso ụzọ ha zụtara site na ụlọ ọrụ kwụsịrị mgbe obere awa gachara, ma ọ bụ ndị ahụ na-eso ụzọ na-arapara ma na-emekọrịta ọdịnaya ahụ n'ezie?
Ọ bụrụ na ị chọrọ zụọ ndị na-eso ụzọ dị elu site na ụlọ ọrụ ọ bụla, mgbe ahụ ịkwesịrị ijide n'aka na ọnụego njide ahụ dị elu. Oge njide bụ ikike nke ndị na-eso ụzọ ịrapara ma na-arụsi ọrụ ike na ọwa gị.
A obere njigide ọnụego pụtara na ha ga-ada ada mgbe ọ bụla oge. Nke a ga - ahapụ ndị na - eso ụzọ gị dị adị na-adịghị mma. Ya mere, jide n'aka na ị nwere ike nweta ezigbo njigide ọnụego.
Ihe ọzọ ị kwesịrị ịtụle mgbe ị na-ahọrọ ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị zụta ụmụazụ Twitch site na ma ha nwere nkwụghachi nkwa ma ọ bụ na ha enweghị.
Ọ bụ ezie na nke a adịghị mkpa, ọtụtụ ụlọ ọrụ dị elu ga-agba mbọ hụ na ekpuchi akụkụ a nke usoro a. Nke a na - enye gị ohere ịnwale ma jiri atụmatụ ha rụọ obere ntakịrị na - enweghị mmetụta dịka ị ga - atụfu nnukwu oge ma ọ bụrụ na ihe anaghị arụ ọrụ dị ka atumatu.
Nkwụghachi ahụ pụtara na ọ bụrụ na ịnwetaghị nnyefe nke ị tụrụ anya ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnaghị eme nke ọma na ndị na-eso ụzọ ya na ihe niile bụ nkwụsị, ịnwere ike ịpụ na ndenye aha ma nweta ego gị na-efufu ihe ọ bụla.
Ihe kpatara net nchekwa a dị mfe: ụlọ ọrụ ndị kwenyere na atụmatụ ha na ọrụ ha ga-eji ọlyụ kpuchie akụkụ a enweghị nsogbu ọ bụla.
O siri ike ịkwado atụmatụ a maka mkpa ma ọ bụ dị ala karịa ndị ọzọ. Agbanyeghị, inwe ike ịbanye na ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ihe adabaghị bụ akụkụ dị ezigbo mkpa n'ịzụta ndị na-eso ụzọ Twitch gị.
Ọbụna nke ahụ, nke a bụ n'ezie nnukwu ihe na ezigbo akara ngosi na ụlọ ọrụ nwere ntụkwasị obi ebe ọ na-efu ọtụtụ ihe na njedebe ha ịtọlite ​​atụmatụ dịka nke a.
Dịka ihe achọrọ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-eresị ndị ahịa ebe ọ bụla ntanetị ọrụ ma ọ bụ sọftụwia, ọ ga-enwe ike ịkwado ya site na nkwukọrịta na ịza ajụjụ dị mma.
Ọ bụ naanị otu o si aga - ọ nweghị ihe kpatara na ịgaghị enwe ike ịbanye na azụmahịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe. Ọ bụrụ na ọ bụ mgba, mgbe ahụ, a ga-ewere nke a dị ka ọkọlọtọ uhie. Na-eme mgbe niile ka ịhọrọ ụlọ ọrụ nwere ọkwa dị elu maka ndị ahịa ha.
Njirimara a n'eziokwu dabara adaba na ụdị ịbụ n'ezie dị mkpa mgbe ị zụta ụmụazụ Twitch. Ikwesiri inwe ike ịkwụ ụgwọ ego gị n'enweghị nsogbu ọ bụla nke izuru nọmba kaadị kredit gị.
Ọnọdụ kachasị mma bụ ịchọta ụlọ ọrụ nwere ike inyere gị aka ịkwụ ụgwọ site na usoro ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị dịka PayPal ma ọ bụ Bitcoin.
Wayzọ a, ịkwesighi igosi ọnụọgụ nọmba kaadị kredit gị ma nwee ihe ọghọm ma ọ bụrụ na ị phished ma ọ bụ hacked.
N'ezie, anyị anaghị atụ aro ka gị na ụlọ ọrụ na-anaghị enye usoro ịkwụ ụgwọ dị mma ga - eso gị gaa - ebe ọnụahịa ha nwere ike ịmasị mma, ihe egwu dị na ya enweghị isi.
Ga-ahụ ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike ịzụta ụmụazụ Twitch n’enweghị nchegbu gbasara ịhapụ nkọwa nke onwe gị.
Ọ bụ ezie na ha ga-achọ ụfọdụ ozi dị mkpa dị ka email gị, ịkwesighi ịnye ihe dịka paswọọdụ gị.
Onweghị ụlọ ọrụ nwere ezigbo aha ga-ajụ ka ị nye ụdị ihe ndị a aka. Ya mere, lezie anya maka ụdị arịrịọ ndị a ma jiri amamihe họrọ.
Ihe ikpeazu ịchọrọ ịtụle mgbe ị na-ele ụlọ ọrụ dị anya ebe ahụ nwere ike inyere gị aka ịzụta ndị na-eso ụzọ Twitch bụ ihe profaịlụ nke ndị na-eso ụzọ dị ka ya.
Ha nwere profaịlụ profaịlụ jikọtara ha? Hà bụ ụdị ndị na-eso ụzọ nwere bios zuru ezu, ha ga-emekọrịta na akaụntụ gị?
Ikwesiri igba mbọ hụ na ndị na-eso ụzọ dị mma, ma nye ọwa gị ụzọ ị ga-esi too na-enweghị ọnyà. Na-enyocha ihe ụmụazụ ga-adị ka mgbe niile tupu itinye ego na ihe ọ bụla.
Gịnị Bụ Mgbakwunye Mgbakwunye?
Ozugbo inwetara ndị na-ege ntị na Twitch, ị nwere ike ịmalite iche echiche banyere itinye maka Mgbakwunye Mgbakwunye. Ma gịnị ka ọ bụ?
Mgbakwunye Mgbakwunye bụ mmemme na-akwado ndị na-asọ mmiri na-ebi ndụ site na ịme ihe ha hụrụ n'anya ime; gụgharia. Dị na ụwa niile, mmemme mmemme ahụ na-enye ndị na-egwu mmiri ohere:
Nweta na ntinye na ndenye aha
Malite Nweta na Twitch na Bits
Nweta ego site na ire egwuregwu ma ọ bụ ihe egwuregwu na Twitch
Nke a bụ ihe Twitch nwere ikwu maka mmemme a:
“The Mgbakwunye Mgbakwunye Mmemme na-eme ka ndị ruru eru iyi mmiri otu nzọụkwụ dị nso n’ebe nrọ nke ibi ndụ site na agụụ mmekọahụ ha. Ndị mmekọ Twitch nwere ike ịmalite ịkpata ego na Twitch ka ha na-ewulite ndị na-ege ha ntị ma na-arụ ọrụ maka ochicho ọjọ nke Onye Mmekọ Twitch.
Yabụ n'ụzọ bụ isi, site na iji ndị na-eso ụzọ Twitch zuru oke, ị nwere ike isonye na mmemme ahụ wee nweta ego site na nkwanye dị ka ọrụ oge.
Gịnị bụ ihe ndị a chọrọ?
Na mbido, Twitch lere ihe mgbakwunye achọrọ ka ị bụrụ:
Ọ dịkarịa ala ụmụazụ 50
500 ngụkọta nkeji ohuru
Uniquebọchị mgbasa ozi pụrụ iche 7
Nkezi nke ndị na-ekiri 3 ma ọ bụ karịa
Ihe ndị a achọrọ ga-ezute n'ime ụbọchị 30, iji tozuo maka mmemme ahụ
Ozugbo ị ruru eru, ị ga-enweta ozi ọma na ebe ole na ole dị iche iche - email, ọkwa, yana ọkwa ọkwa - yabụ kpachara anya na-enyocha ọnọdụ nke akaụntụ gị.
Ọ bụ ezie na ọnụ ụzọ ndị a nwere ike ime maka onye ọ bụla dị njikere itinye oge na mgbalị, mgbe ụfọdụ, ịmepụta ọdịnaya dị oke ezughị. Nke a bụ ya mere ọtụtụ ji atụle ịzụta ụmụazụ Twitch.
Etu esi enweta ego na mgbakwunye mmekọ
Otu esi enweta ego na Mgbakwunye mmekọ
Mmekọrịta Twitch nwere ike ị nweta ego ọzọ maka akaụntụ ha site na ịnye ụfọdụ n'ime nhọrọ ndị a: Ndenye aha, Bits, na Mgbasa ozi. Payoutgwọ maka onye ọ bụla na-adabere n'ọtụtụ ihe dị iche iche, dịka ndị na-akpọsa mgbasa ozi ma ọ bụ ndị na-ekiri ọwa.
Ndị mmekọ ga-enweta na Twitch mgbe ọ bụla ha nabatara ndenye aha ndị na-ege ha ntị. Nhọrọ ndenye aha niile dị: $ 4.99, $ 9.99, $ 24.99, na ndenye aha n'efu nke Prime.
Bits bụ ego ego Twitch nke ndị debanyere aha nwere ike izigara na ndị mmekọ Twitch. Dika ndi debanyere aha obi uto na iyi nke nwere ihe eji egwu egwu ma obu Cheermotes, ndi ozo Twitch ga enweta udiri nke $ 0.01 na nloghachi.
Na Twitch, ndị mmekọ nwere ike ịnweta ego site na ire ere ma ọ bụ ihe egwuregwu.
Ọ bụrụ na ndị na - egwu mmiri na - egwu egwuregwu na - iyi - ma ọ bụ gosi ihe egwuregwu n’ime ere maka ire ere - dị na Twitch, ndị debanyere aha nwere ike zụta ozugbo na ọwa ha. Mgbakwunye ga-enweta 5% nke oke nke ịzụrụ nke sitere na ibe ha.
Wzọ ndị ọzọ iji nweta ego na ndị na-eso ụzọ Twitch
Ọ bụrụ n’abụghị Mgbakwunye Twitch ma, ị ka nwere ike ịtọ onyinye ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na onyinye ndị ọzọ agaghị enye gị ohere ịnweta bits ma ọ bụ cheermotes, ị ka ga-enweta ego site n'aka ndị na-ekiri gị.
Dịka, ị nwere ike ịtọ akaụntụ PayPal ma gwa ndị na-ekiri gị ka ha nye onyinye n'ebe ahụ. Saịtị ahụ nwere atụmatụ onyinye amara ama ama nke ejiri n'ọtụtụ obodo na ntanetị.
Zọ ọzọ iji nata onyinye nwere ike ịbụ site na otu ndị otu dị ka Patreon. Ihe ntanetị ndị a na-enyere ndị ọrụ aka ịtọ onyinye kwa ọnwa nye ndị okike ọdịnaya ha masịrị maka elele dị ka ịnweta ohere Discord, ọdịnaya ego, ahịa nkịtị, na ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na ndị na-ege ntị ga-azụrịrị ngwa ahịa gị, na-ere ngwaahịa ndị dịka t-shirts, sweatshirts, ma ọ bụ iko ndị nwere akara njiri metụtara ụdị iyi gị nwere ike ịbụ ụzọ kachasị mma iji gbanwee ego gị.
Enwere ọtụtụ ọrụ nwere ike inyere gị aka na ngwa ahịa - Teespring, Redbubble, na Zazzle.
E wezụga na-amị ngwaahịa ewere na gị logo, ị nwekwara ike ika ngwaahịa na ọwa emotes gị chat amasị na-eji mgbe.
Ihe ọzọ ị ga - eme bụ ịgakwuru ndị na - ese ihe (ma ọ bụ na saịtị dịka Fiverr ma ọ bụ n’ime obodo gị) iji mepụta atụmatụ ọhụụ ga - adabara ndị na - ege gị ntị.
Sdị dị ka iji ndị na-eme ihe ike iji kwalite ngwaahịa ha. Ozugbo mmiri iyi nwere ihe ndị na-esonụ, akara ga-erute ha iji kwalite egwuregwu vidiyo ma ọ bụ ngwaahịa ndị ọzọ n'ụdị nkwado.
Ezigbo nkọwa nke nkwado ndị a ga-adị iche site na ika rue ika yana yana nkwekọrịta ya na ndị iyi ọ bụla.
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ akụkụ nke ndụ, ịkwado ụdị nkwado dị mkpa banyere onye ị maara na onye maara gị. Iji bulie njikọ nke njikọ gị, gakwuru ndị na-eme mkpebi ụlọ ọrụ site na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ na ikpughe na mgbakọ.
Rịba ama na dịka ọ dị na mmiri iyi ndị ọzọ a tụlere n'isiokwu a, ị ga-achọ inwe nnukwu ọnụọgụ na-eso maka nkwalite akara iji nwee uru bara uru.
N'ezie, ọ bụrụ na ịchọta akara nke dabara na niche gị, ị nwere ike ịmekọrịta azụmahịa ọbụlagodi na ị naghị adọta ọtụtụ puku echiche ọ bụla.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta nkwado site na ika, ị ka nwere ike ịme ego site na ịkwalite ngwaahịa site na mmemme mmekorita (rịba ama na nke a dị iche na mmemme mmekọ nke Twitch anyị kwuru maka ya n'elu).
Mmemme ndị a ma ọ bụ usoro ntughari ga - ewetara gị obere akụkụ nke uru oge ọ bụla mmadụ pịa njikọ gị wee zụta ngwaahịa.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eji ngwa, akụrụngwa, ma ọ bụ ngwanrọ akọwapụtara n'oge iyi gị, ị nwere ike ịnye njikọ maka ngwaahịa ndị ahụ site na mmemme Amazon Associates. Ndị na-ekiri gị nwere ike pịa njikọ gị wee zụta ngwaọrụ gị nke ahia - na-enye gị ntakịrị ego ọzọ.
Ndị mmekọ Amazon nwere ike ile anya na-adọrọ mmasị maka ndị na - egwu mmiri: Ndị mmekọ Twitch na - enweta ọnụego ọrụ dị elu site na Amazon Blacksmith - Ngwunye ụlọ ọrụ Amazon Associates - nke karịrị akụkọ ntinye aka.
Nke a pụtara na ozugbo ị ruru ọnọdụ mmekọ nke Twitch, ndị mmekọ Amazon nwere ike ịbụ ọnụọgụ ego na-abawanye uru ma e jiri ya tụnyere mmemme mmemme ndị ọzọ.
Fọdụ ụdị a kapịrị ọnụ na-enyekwa mmemme nke aka ha. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ ngwaike egwuregwu na-egwu egwu nwere ihe omume mmekorita nke na-efere ihe ruru 10% nke ire ọ bụla na ndị mmekọ - ọnụego dị elu karịa nke ị nwere ike ịhụ na Amazon Associates.
Ndụmọdụ iji nweta ndị na-eso ụzọ ọzọ na Twitch
Ndụmọdụ iji nwetakwu ndị na-eso ụzọ na Twitch
Agbanyeghị na ọ bụ gị ka ị ga - ekpebi ma ịchọrọ ịzụrụ ndị na - eso ụzọ Twitch, ọ naghị afụ ụfụ ịnwale ụfọdụ ndụmọdụ ndị a iji dọta ndị na - eso ụzọ.
A sị ka e kwuwe, ịmara ndị na-eso ụzọ na-abịakwute gị ma nọrọ site na mbọ gị ka bụ mmetụta kachasị mma.
Nye Ọdịnaya bara uru
Igodo iji nye gị Ndị na-eso ụzọ Twitch na ndị na-ekiri ya uru bụ ịmata ụdị ọdịnaya ha chọrọ ịhụ.
E nwere ọtụtụ ihe dị iche iche mere ndị mmadụ ji eji Twitch, mana ọ bụrụ na ịmara ihe ndị mmadụ na-achọ, ị nwere ike inye ha ọdịnaya ha chọrọ ịhụ wee bụrụ isi iyi amaara ama maka ndị mmadụ.
Fọdụ ihe kpatara ndị mmadụ ji ele Twitch anya gụnyere:
Nweta ndụmọdụ na ndụmọdụ egwuregwu
Lelee ndị ọkachamara
Nwee ọdịnaya site na njirimara na streamer
Nyere aka ime mkpebi
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe kpatara ya, mana ha bụ ndị isi maka ndị na-ekiri na Twitch. Mgbe ị na-eke ọdịnaya gị, gosi ụdị mmadụ ị bụ, gosi nka aka gị, pụọ iche, ma tụlee isiokwu na egwuregwu ị hụrụ n'anya.
N'adịghị ka nkwenkwe a ma ama n'ezie ịbụ ezigbo egwuregwu ị na-egwu abụghị ihe dị elu. Producingnọgide na-ewepụta ọdịnaya dị mma site na ụbọchị mbụ ga-enye gị ngwá ọrụ dị ike iji mee ka ndị na-eso ụzọ gị na ndị na-ekiri ihe na-alọghachi na iyi Twitch gị.
Jiri Ngwa Gbanwee Ogo
Ọ bụ ezie na ịkwesighi itinye ego na steeti ọrụ nka, ịkwesiri ịnwe ngwaọrụ gụgharia nke na-egosi na ị pụtara azụmaahịa gbasara imepụta ihe ngosi dị elu na ọdịyo.
Ka anyị chee ya ihu, ọ dịghị onye ga-anọnyere ọwa gị ma ọ bụrụ na iyi gị na-ala azụ, nwee mkpebi vidiyo adịghị mma, ma ọ bụ nwee nsogbu na ụda ahụ.
Na mgbakwunye ezigbo igwefoto weebụ nke ga-ewepụta agba dị mma na ogo vidiyo, ị kwesịrị itinye ego na akụrụngwa ọkụ iji gbanwee ọdịdị nke iyi gị. Igwe ọkụ dị mma nwere ike jupụta na ndò iji mee ka ọnọdụ gị dị elu ma belata ma ọ bụ mepụta ọdịiche (dabere na ụdị gị).
Nzọụkwụ dị mfe a nwedịrị ike igosi onye na-ekiri ihe na-esiri gị ike naanị site na thumbnail gị.
Jiri igwe okwu dị mma nke na-ebuli olu gị ma na-ehichapụ ọtụtụ mkpọtụ ụda. Mụọ iji ya ka ị mara etu ị ga - esi pụọ na ya maka mma kacha mma. Kwere anyị, ọ dịghị onye chọrọ ịnụ ume gị mgbe ọ na-ekwu okwu.
Anyị na-akwado gị ka ị rụọ ụda ndenye ego gị na ngwanrọ ngwanrọ gị iji jide n'aka na vidiyo na ọdịyo gị. Na-ekwu okwu n'ụzọ doro anya ma na-akpọpụta okwu gị mgbe ị na-agagharị. Emela mkpu ma ọ bụ mee mkpọtụ na-adịghị mma na igwe okwu gị.
Gị na ndị ọzọ iyi ma ọ bụ ndị enyi rụkọta ọrụ
Soro ndị ọzọ rụọ ọrụ
Ọ bụrụ na ịnwere ike ịmekọrịta na ndị enyi na ndị iyi ị na-ekerịta mmasị, ndị na-ekiri ga-abanye n'ime ọdịnaya gị ma chọọ ịhụkwu. Were ndi na-egwu mmiri dika ndi enyi, obughi ndi ndoro-ndoro.
Mee atụmatụ mmiri iyi ọnụ tupu oge eruo ma kpebie ụzọ kacha mma ị ga-esi bịaruo ọdịnaya gị. Buru ma ndị na-ege gị ntị n’obi na-asọpụrụ ibe ha. Na-eme ememme nke ibe gị ma na-agbarịta ibe gị ume ka ị na-aga n'ihu n'ọrụ gị.
Ka ndị na-ekiri ha hụrụ gị n'anya, ha ga-esokwa gị.
Uru ọzọ nke imekọrita bụ na ị nwere ike nọrọ na nke ibe gị mgbe ị naghị anọ n'ịntanetị. Ikekọrịta nnyekọrịta na-eme ka ohere ị ga-ekerịta na-eso ụzọ na ị nwere ike n'otu oge wuo ọwa gị ọnụ.
Nweta ọwa ndị ọzọ nwekwara ike ịpụta na a ga-enwerịrị ndị na-ekiri na ọwa gị mgbe ị banyere maka iyi nke gị.
Cross-Na-akwalite Twitch gị na Social Media ndị ọzọ
Gaghị atụ anya na ndị na-ekiri gị mgbe niile ma ọ bụrụ na ọ nweghị onye maara na ị na-enuba.
Dị ka ndị dị otú a, ịnwe ọnụnọ na mgbasa ozi mmekọrịta na netwọk ndị ọzọ nwere ike ịbụ uru maka ịbawanye na akaụntụ Twitch gị. N'ezie, ọ bụrụ na ị nwere mgbasa ozi mmekọrịta na-eso na netwọk ọzọ, ị ga-enwe ike inwe ọganihu Twitch na-aga nke ọma.
Ihe kpatara nke a bụ na ndị mmadụ ụbọchị a nwere 8 akụkọ mgbasa ozi mmekọrịta na nkezi. Nke a pụtara na ị nwere ike ijikọ nyiwe ndị a iji mee ka ọtụtụ ndị na-agagharị na profaịlụ gị Twitch.
Mgbe ị mere nke a, gụnye ntakịrị ihe ọmụma, dị ka egwuregwu ahụ ma ọ bụ ọdịnaya ị na-eme atụmatụ iyi, njikọ nke ọwa gị, onyonyo maka ịrịọ arịrịọ, hashtags, na akara njirimara maka ndị ọrụ dị mkpa nwere ike inyere aka ịkekọrịta ma ọ bụ mee ka ị nwekwuo echiche. .
Ka ị na-ewulite obodo gị na akaụntụ mgbasa ozi gị, biputere ọdịnaya bara uru maka ụmụazụ gị. Agwala ha naanị mgbe ị ga-adị ndụ. Ma ị jiri Facebook, Instagram, Twitter, Discord, ma ọ bụ netwọk ọzọ, nwee usoro doro anya ma chetara ha na ị ga-agbasa.
Gụnye ọdịnaya ndị ọzọ yana na akaụntụ mgbasa ozi ndị a ka ndị mmadụ wee rapara ma ghara ịgwụ ha ike. N'ụzọ ahụ, ha ga-ewere gị na ị nwere mmasị ọ bụghị naanị na saịtị ndị ahụ, kamakwa na-akpali akpali karị ịlele akaụntụ Twitch gị.
Yabụ, n'ebe ahụ ka inwere ya - anyị egosila gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere ya otu esi azụta ndị na-eso ụzọ Twitch.
Chọpụta, ọ kachasị mma iji wuo otu onye na-esote otu oge ma jikọọ ya na ọtụtụ ndị na - ekiri gị otu ị nwere ike. Agbanyeghị, nyere asọmpi ahụ n'etiti nde ndị iyi iyi nwere otu ebumnuche, o siri ike ime ka ọwa gị pụọ.
Zụ ndị na-eso ụzọ Twitch, ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe mgbagwoju anya, nwere ike gbanwee ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị họrọghị ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị ịzụta. Cheta, ụlọ ọrụ ahụ bụ ọgba aghara na enweghị atụ, nke pụtara na enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ebe ị ga-achọ izere.
Maka nke a, AudienceGain nwere obi ụtọ inye gị ọrụ anyị. Anyị na-ekwe nkwa na anyị bụ naanị ndị kachasị mma Twitch na-eso ụzọ n'ụzọ kachasị dị mma na nke ahịhịa. Enwere ike ịchọta usoro ọ bụla anyị depụtara n'elu na ọrụ anyị.